ठेलागाढामा साग बेचेर भाइरल भएकी दिदीको सबैलाई रूहाउने कहानी:बिहान देखि बेलुका सम्म भोक भोकै सडकमा! – Complete Nepali News Portal
Kamal Sargam September 9, 2020
सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेकी यी महिलालाई हामीले किन पछ्यायौँ ? किन उनको आवाज यति महत्वपूर्ण छ ? किनकि, यो देशका तीन करोड जनसंख्यामध्ये दुई करोड आठ लाख मान्छे काम गर्ने उमेरका छन् । तर, तीमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् एक करोड २३ लाखले गरेको काम रोजगारीको परिभाषामै पर्दैनन् । उनीहरूले काम गर्छन्, तर उनीहरूको उत्पादन बजारमा बिक्री हुँदैन ।
उनीहरूले तलब पनि पाउँदैनन् । रोजगारी गर्ने भनिएका ८० लाखमध्ये ५७ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । जसको नियमित तलब आउँदैन । महामारीले उनीहरूको जीवनमा आर्थिक विपत्ति ल्याएको छ । उनीहरूका लागि सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने हो, तर यति लामो लकडाउनमा कतिले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्यांकसमेत सरकारले संकलन गरेको छैन । हेरौ भिडियो कुराकानी :
मेरो कथा ! बा ले सबै
भीमेश्वरको शिलामा ‘पसिना’ आएपछि पूजापाठ, प्रसाद
केही व्यक्तिहरुका लागि अनार खानु खतरनाक
मित्रता भनेको अवसर होइन, मीठो दायित्व
गुल्मीमा भएको जीप दुर्घटनामा मृतकको संख्या
प्रवासी नेपाली एकता मंच, युकेद्वारा नेकपा
महामारीमा अमेरिकाका नेपालीहरूको धन्यवाद दिवस (‘थ्याङ्कसगिभिङ्
बिदेश लाने भन्दै करोडौं ठगी गर्ने पक्राउ कोपा, चिबे, कालीबुढीको...
गायक राजु परियारको कान्छो भाइ गीतबाट लाखौ डुबेपछि कपडा सिलाउने...